Noocyada Telegram-ka ugu fiican, maxay u shaqeeyaan sidee se loo rakibaa? | War gadget
Qolka Ignatius | | Mobiles, Software
Kahor imaatinka Telegram iyo bots-keeda, sida caadiga ah eraygan had iyo jeer wuxuu ahaa sidan oo kale waxqabad kasta oo otomaatig ah oo badanaa loogu talagalay waxqabadyada la xiriira dhaqamada xun, in kasta oo aan had iyo jeer, dabcan. Laakiin imaatinka bots-ka waxay u rogtay barxada fariimaha codsi wax qabad leh oo aan ku fulin karno howlaha nuucyadiisa kala duwan, howlaha si dhameystiran u dhameystiraya codsiyada kale ee laga heli karo dukaamada arjiga kala duwan, ha noqdo Apple Store ama Google Play. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa botyada ugu fiican ee loo heli karo Telegram.
Adiga oo aadan dhaafin shaandho kasta oo ka mid ah dukaamada arjiga, way fududahay in la helo bots aan marna ku arki karin nidaamka deegaanka, sida iOS, halkaas oo aynaan ka helin wax codsi rasmi ah oo noo ogolaada inaan kala soo baxno codka kaliya fiidiyowyada YouTube-ka, hawl aan si dhakhso leh ugu qaban karno bots Telegram-ka.
Dhalad ahaan, Telegram wuxuu na siiyaa dhowr bots oo si asaasi ah loogu rakibay dhammaan wada sheekaysiga oo aan ka helno raadinta fiidiyowyada YouTube-ka, ka raadso GIF-yada ku yaal Ghipy iyo qaabka qoraalka ee 'Markdown' si aad ugu isticmaali karto geesinimo ama isjiidjiid wadahadal. Si aan iyaga u helno waa inaan qorno @ oo seddexdan ay muuqdaan, si aan u dooran karno midka aan raadineyno xilligan ama aan u isticmaali karno sida soo socota: "@vid video name", "@gif gif name "iyo" @Bold qoraal qoraal ah waxaan dooneynaa inaan ku muujino geesinimo ama faatal ".
1 Noocyada bots ee Telegram
2 Waa maxay bot?
3 Sida loo rakibo bot a Telegram
4 Bots-yada ugu fiican ee Telegram
4.2 Abuur codbixin
4.3 Turjubaan Yandex
4.5 Macluumaadka filimka
4.6 U badal qoraalka codka
4.7 Heerarka Sarrifka Lacagta
4.9 Maxaa kucusub Netflix
4.10 Ku raaxayso ciyaaraha Telegram
4.11 Baadhitaan Kooban
4.12 The Hangman
4.13 Codka fiidiyowyada kala soo bax YouTube-ka mp3
4.14 Kudar filtarrada sawiradaada
4.16 Baro luuqada Ingiriiska
4.17 La kulan isticmaalayaasha kale
4.18 Dukaanka aan rasmiga ahayn ee bot waa Telegram
5 Sida loo sameeyo bot
Noocyada bots ee Telegram
Bootooyinka dhexdooda waxaan ka heli karnaa laba qaybood. Waxa loogu yeero Inline waa kuwa aan ka heli karno isku dhafka arjiga waxaanan ka faa'iideysan karnaa adoo ku qoraya @ la raacaya oo aan kala soocayn magaca bot: @gif trump wuxuu soo celin doonaa hadiyado madaxweynaha hadda ee Mareykanka. . Inta badan khadadka khadadka tooska ah ayaa si asaasi ah loogu rakibay arjiga, sidaas darteed maahan inaan sameyno wax aan ku rakibo iyaga.
Kadibna waxaan helnaa bots madaxbannaan oo u shaqeeya sidii inay yihiin kanaal lagu sheekeysto. Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'bot' waa inaan ka raadinaa iyada oo loo marayo mashiinka raadinta Telegram oo aan ku biirno, si aan hadhow ugu habeynno sida aan doorbidno oo aan ugu tagno mar kasta oo aan u baahanno. Noocan bot wuxuu na siiyaa macluumaad shaqsiyeed ama qabtaa hawlo kala duwan taas si toos ah looma qaban karo iyadoo qashin la dhex gelinayo wadahadalka.
Waa maxay bot?
Bootooyinku waxay leeyihiin hawl otomaatig ah sidaa darteed layaab ma leh in erayga bot uu ka yimid Robot. Bot waa barnaamij yar oo la qorsheeyay oo ku dayanaya dhaqanka aadanaha, si aan ula falgalno oo noo siiya natiijooyin kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaheena, qaabkan waxaan ku heli karnaa buugaag noo ogolaanaya inaan qabanno hawl kasta, si kasta oo ay u muuqato la yaab. Haddii aadan heli karin barnaamij sameeya shaqo gaar ah, waxay u badan tahay inay jirto bot iyada ah.
Sida loo rakibo bot a Telegram
Si loo rakibo mid ka mid ah bot-yada aan ku tusnay qodobkaan, kaliya waa inaad gujisaa xiriiriyaha aan kaaga tagayo, ama aad sanduuqa raadinta raadinta ee ku yaal dusha sare ee sheekaysiga, waa inaan hoos u mari wadahadallada si aad uga muuqato.
Marka xigta waa inaan ku qornaa magaca bot-ka sanduuqa raadinta, tusaale ahaan @gamee si kanaalada ciyaarta Telegram uu u furo daaqad cusub oo lagu sheekeysto waxaan ka dooran karnaa tiro badan oo ciyaaro ah. Labada siyaabood midkoodna waa ansax oo wuxuu noo ogolaanayaa inaan helno bots Telegram.
Bots-yada ugu fiican ee Telegram
Waxaan u maleynayaa in bot-kan uusan u baahnayn sharaxaad badan, maadaama ay tahay inaan kaliya galno shuruudaha raadinta si bot ay noogu soo celiso natiijooyinka kala duwan ee ay ku keydisay keydkeeda weyn. Sida iska cad haddii aan rabno inaan helno natiijooyin dheeri ah, waa inaan ku soo bandhignaa ereyada af Ingiriis.
Haa, sidoo kale waa suurtogal in lagu abuuro sahanno kanaalka Telegram iyada oo loo marayo @pollbot bot, bot ah oo noo oggolaan doona inaan su'aalo kala duwan ku dhignno jawaabo horay loo sii qorsheeyay, sidoo kale na siiya natiijooyin faahfaahsan tirada jawaabaha iyo boqolleyda.
Turjubaanka Yandex ayaa noo oggolaan doona u turjun luqad kasta iyo luqad kasta qoraalka aan ku galno wadahadalka loogu talagalay bot-kan. Laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan aasaasno luqad asal ah si aan u fulino tarjumaadaha isla markaana sidan ugu dhakhso badan helitaanka natiijooyinka tarjumaadaha.
Thanks to bot this, maalin kasta waan heli doonnaa horoscope-keena Codsigeena farriinta ee Telegram-ka, waxaan horey ugu qasbanaan doonnaa inaanu qaabeyno waxa calaamadeena calaamaddu tahay.
Filimada Tracker Bot wuxuu na siiyaa macluumaad ku saabsan filimada aan dooneyno. Dhamaan macluumaadka waxaa laga soo saaray adeegga Amazon IMDB, mid ka mid ah keydka macluumaadka ee ugu weyn wax walba oo xiriir la leh filimka iyo telefishanka. Si aan ugu darno Filimada Tracker Bot kaliya waa inaan ku qornaa sanduuqa raadinta @ filimS4Bot. Dabcan, haddii aan galno magaca filim kaas oo dhowr nooc ah, dhammaantood waxay ka muuqan doonaan sheekada, taas oo noqonaysa wax yar oo dhibaato ah si loo hubiyo midka aan runti raadineyno.
U badal qoraalka codka
Bogga @pronunciationbot bot wuxuu noo ogolaanayaa inaan qoraalka ugu badalno maqal inta udhaxeysa 84 luqadood oo kala duwan, bot ah oo aan u adeegsan karno shaqsi ahaan ama aan ku dari karno koox dhexdeeda si loo fududeeyo xiriirka u dhexeeya isticmaaleyaasha ku jira.
Heerarka Sarrifka Lacagta
Boodhadhkan ayaa isla markiiba noo sheegi doona isbeddelka hadda u dhexeeya lacagaha kala duwan ee laga isticmaalo adduunka. Waa inaan kaliya geli qaddarka iyo lacagta aan dooneyno inaan ku helno beddelaad lacagteenna, lacagta maxalliga ah ee aan awal hore u yeelan doonno inaynnu ku hagaajinno markii ugu horreysay ee aan socodsiino bot-ka.
Bot-kani waa cimilo-yahankeena kanaalka Telegram-ka. Kaliya nama soo wargelinayso cimilada noqon doonta maalinta aan joogno, laakiin sidoo kale waxay na siin doontaa saadaasha hawada 5-ta maalmood ee soo socota. @abdihakin_abdi
Maxaa kucusub Netflix
Adeegga fidinta fiidiyowga ee adduunka hogaaminaya lagama tagi karin noocan oo kale ah boodhadhka mahadnaqaana ah @netflixnewsbot waxaan ka heli karnaa macluumaad ku saabsan horyaal kasta oo cusub oo gaara buugga Netflix ee 38 dal, oo ay ku jiraan Spain.
Ku raaxayso ciyaaraha Telegram
Buugga @gamee Waxay na siineysaa fursad aan ku helno tiro badan oo ciyaaro ah oo loogu talagalay html5 oo noo oggolaanaya inaan waqti fiican qaadanno sidoo kalena aan la wadaagi karno natiijooyinka asxaabteena. Waxaan dhex mari karnaa inta udhaxeysa cayaaraha ugu caansan, qeybaha, kuwa ugu badan ee la ciyaaray, kuwa is badalaya, iyo waliba inaan la ciyaari karno asxaabteena. Waxaa ka mid ah ciyaaraha ay bixiso barnaamijkan aan iftiimino laba:
#Trivializa bot ayaa noo ogolaanaya ku raaxayso daba-galka 'Trivial Pursuit' oo af Ingiriisi ah, taas oo ugu yaraan noo oggolaan doonta inaan horumarinno heerkeenna Ingiriisiga wax yar. Kani waa mid kamid ah cayaaraha yar ee ciyaarta siiya ciyaaro badan haddii meel fagaare ah lagu qabto.
Mid kale oo ka mid ah kuwa qadiimiga ah waa Hangman, ciyaar ay tahay inaan isku dayno inaan ka badbaadino dabeecadeena xarigga adoo maleynaya erayga qarsoon. Munaasabaddan oo aan ka duwanayn daba galka Trivual, @HangBot wuxuu na siinayaa suurtagalnimada inaan ku ciyaarno Isbaanish.
Codka fiidiyowyada kala soo bax YouTube-ka mp3
Buugga @ dwnmp3Bot Waxay noo ogolaaneysaa inaan kala soo baxno codka fiidiyowyada YouTube-ka, oo ku habboon markasta oo aan marwalba wadno muusigga aan jecel nahay annaga oo aan u baahnayn inaad ka soo degsanno internetka. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan dhisno tayada aan ku soo dejisan karno fiidiyowga. Markaad soo dejiso, waxay na siineysaa ikhtiyaarka aan ku furan karno mid ka mid ah codsiyadayada, la wadaag ...
Kudar filtarrada sawiradaada
Waxaa jira bots wax walba oo mid noo ogolaanaya inaan ku darno miirayaal kama maqnaan karno Telegram. Waxaan ka hadlaynaa bot @ icon8bot, oo aan ku awoodi doonno ku dar shaandhooyin kala duwan Gali liis dheer oo sawirro ah oo aan ku darno bot-ka.
@AllWallpaperBot waxay noo ogolaaneysaa inaan raadino sawirrada mawduucyada kala duwan ee loo isticmaalo asalka qalabkeenna. Waxay ku habboon tahay dhammaan kuwa jecel inay shakhsiyeeyaan qalabkooda.
Buugga @AyaanRobot Waxay noo oggolaan doontaa inaan horumarinno heerkeenna Ingiriisiga mahadnaqa Professor Andy, kaasoo noo oggolaan doona inaan wadahadal la yeelanno isaga oo marba marka ka dambaysa waxaan arki doonnaa sida aqoonteenna Ingiriisigu u hagaagayso. Dabcan, waa inaad noqotaa mid aad u joogto ah si heerkeenna Ingiriisigu u fiicnaado. Qofna mucjisooyin ma sameeyo, sidoo kale bots ma sameeyo.
La kulan isticmaalayaasha kale
Haddii aad rabto inaad tijaabiso waayo-aragnimo cusub oo aad la kulanto dad cusub, @strangerbot bot ayaa ina dhigi doona xiriir ula leh isticmaaleyaasha kale gabi ahaanba si qarsoodi ah iyo waddan kasta oo adduunka ah.
Dukaanka aan rasmiga ahayn ee bot waa Telegram
Maqaalkan waxaan isku dayey inaan ku soo koobo bots-yada ugu muhiimsan uguna waxtarka badan ee aan ka heli karno Telegram, laakiin sida iska cad dhammaantood maahan waxa ay yihiin. Haddii aad rabto inaad gasho dukaanka aan rasmiga ahayn ee Telegram bot oo aad ka raadiso qaybaha, kaliya waa inaad isticmaashaa bot-ka @storebot
Sida loo sameeyo bot
Haddii aad gaadhay qodobkan, waxay u badan tahay inaad bilawday inaad aragto sida botsku u yahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu waxtarka badan ee ay Telegram na siiso. Haddii uu ku qaniinay cayayaanka oo aad rabto inaad bilowdo abuurista bots kuu gaar ah, waxaad ku dhex mari kartaa hagahan si aad u abuurto bots @PaqueBot, oo ah hage Waxay kaa caawin doontaa inaad talaabo talaabo u sameyso si aad u abuurto bots-kaaga adigoon qorin hal xariiq oo koodh ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Bootooyinka ugu fiican Telegram
Go'aanka Apple ee soo afjaray Teknolojiyada khiyaaliga ah